सपनामा सर्पले टोकेको वा सर्प देखे के हुन्छ ? पढ्नुहोस् - Experience Best News from Nepal
सपनामा सर्पले टोकेको वा सर्प देखे के हुन्छ ? पढ्नुहोस्
सपनामा सर्पले टोकेको देखिनु वा सर्प देखिनु का शंकेतहरु अलि फरक छन्, सर्प यौन को संकेत हो। सर्पको सपनाले यौनशक्तिलाइ संकेत गर्दछ।
यदि सर्प सपनामा आफुसँग बेरिन्छ वा कुनै शक्ति संचार गर्ने गरि काम गर्दछ भने त्यो सपनाले तपाइको यौन शक्ति बढेको संकेत गर्ने हुन्छ।
केहि सभ्यतामा सर्पलाइ ज्ञान र शक्तिको प्रतिक मानिन्छ । सर्प सपनामा देखिनुको अर्थ हुन्छ, व्यक्तित्वमा आउने परिवर्तन। यस्ता सपनाले तपाइलाइ अत्याउने गर्दछ, तर साथसाथ जुन कुराबाट एकदमै दुखित हुनुहुन्छ ती बिर्साउने अवसर पनि प्रदान गर्छ साथै तपाइलाइ सावधान बनाउछ, र एकदमै नलौ जीवनको बाटोबाट अगाडी बढाउन सहयोग गर्दछ।
हामीले कुनै कुराको परिवर्तन प्रति मानिने डरको को बारेमा हुन्छ यस्तो सपना। जमिन मुनिबाट सुतेर ९हाइबर्नेसन० उठेको सर्प आउदै गरेको सपना देखेमा तपाइमा भएको शक्ति तथा कार्यक्षमता तपाइको जोश र प्रेरणासगं मिलाउन चाहिने उर्जा प्राप्तिको लागि हुनसक्छ।